Umbhobho wentsimbi yentsimbi Factory | China Stainless steel umbhobho Abavelisi, Suppliers
Iinkcazo ezahlukeneyo zetsimbi engatyiwayo kwisitokhwe
Umbhobho wentsimbi engenamthungo ngumtya omde wentsimbi enecandelo elinomngxuma kwaye akukho lungu elijikelezileyo. Ubuninzi bodonga lwemveliso, lunoqoqosho ngakumbi kwaye lusebenza. Ubuninzi bodonga oluncinci, ixabiso eliphezulu lokucwangcisa liya kuba.
Idayimitha enkulu yeentengiso zomenzi wensimbi engenasici
umbhobho steel stainless luhlobo umngxuma elide ngeenxa zonke intsimbi, nto leyo isetyenziswa ngokubanzi kwimibhobho yosulelo kushishino ezifana petroleum, ishishini imichiza, unyango lwezonyango, ukutya, ishishini ukukhanya, izixhobo mechanical kunye namacandelo mechanical lwesakhiwo.
Ipayipi ye-304 yensimbi engenasici kunye neenkcukacha ezipheleleyo
I-304 insimbi engenasici yinto eqhelekileyo kwinsimbi engenasici, kunye nobuninzi be-7.93 g / cm ³, Kwakhona kuthiwa yi-18 / 8 yensimbi engenasici kwishishini. Ukumelana nobushushu obuphezulu be-800 ℃, kunye neempawu zokusetyenzwa kakuhle kunye nokuqina okuphezulu, isetyenziswa kakhulu kushishino, ishishini lokuhombisa ifanitshala kunye nokutya kunye neshishini lezonyango.
I-Dachang yokwenene ye-304L yeentengiso zemibhobho yensimbi engenasici
Umbhobho we-304L wensimbi engenasici ungowendlela yokumakisha yentsimbi yamazwe ngamazwe. I-304L ipayipi yensimbi engenasici - s30403 (i-American AISI, ASTM) i-304L ihambelana ne-brand yaseTshayina 00Cr19Ni10. Iimpawu kunye nokusetyenziswa: intsimbi enomxholo ophantsi wekhabhoni kune-0Cr19Ni9 inokumelana nokugqwesa okuphezulu kwe-intergranular. Iyingxenye ngaphandle konyango lokushisa emva kwe-welding.
I-316L eyinyani yombhobho wensimbi engenasici kunye nezinto eziqinisekisiweyo
Umbhobho we-316 wensimbi engenasici luhlobo lwentsimbi ende ejikelezileyo, esetyenziswa ngokubanzi kwimibhobho yokuhanjiswa kwamashishini kunye namacandelo esakhiwo esinjengepetroleum, ishishini lemichiza, unyango, ukutya, imboni yokukhanya, oomatshini kunye nezixhobo, njl.
Uxinzelelo oluphezulu lomenzi wetyhubhu yensimbi engenasici
I-316L luphawu lwentsimbi engatyiwa, i-AISI 316L luphawu oluhambelanayo lwaseMelika kunye ne-Sus 316L luphawu oluhambelanayo lwaseJapan. Ikhowudi yedijithali edibeneyo yaseChina yi-s31603, uphawu oluqhelekileyo ngu-022cr17ni12mo2 (umgangatho omtsha), kunye ne-brand endala yi-00Cr17Ni14Mo2, ebonisa ukuba iqulethe i-Cr, i-Ni kunye ne-Mo, kwaye inombolo ibonisa ipesenti esondeleyo.
Umenzi ityhubhu yensimbi engenacala enkulu
I-Ance kunye neempawu zokusetyenziswa, ngoko ke insimbi engenasici iya kuba yenye yezona zinto zibalaseleyo zokwakha emhlabeni.
Umgangatho ophezulu we-stainless steel tube umenzi
Umbhobho wensimbi engenasici ukhuselekile, unokwethenjelwa, ucocekile, ulungele ukusingqongileyo, unoqoqosho kwaye uyasebenza. Udonga olucekethekileyo lombhobho kunye nophuhliso oluyimpumelelo lweendlela ezintsha ezithembekileyo, ezilula kunye nezifanelekileyo zokudibanisa zenza ukuba zibe neenzuzo ezingenakubuyiselwa zeminye imibhobho.
Umbhobho odityanisiweyo wentsimbi, obizwa ngokuba ngumbhobho odityanisiweyo ngokufutshane, ngumbhobho wentsimbi owenziwe ngentsimbi esetyenziswa ngokuqhelekileyo okanye umgca wentsimbi emva kokunyathela kunye nokwenza yiyunithi kwaye ufe.
Ukusebenza okuphezulu kwensimbi engenasici ityhubhu elungiselelwe
Umbhobho wokwenyani obhityileyo wodonga olungenasici kwisitokhwe
I-304 enkulu yombhobho wensimbi engenasici luhlobo lwentsimbi ephezulu ye-alloy enokumelana ne-corrosion emoyeni okanye kwi-chemical corrosion medium. Umbhobho wentsimbi ye-304 unomphezulu omhle kunye nokuxhathisa okulungileyo kokuhlwa.